Ahoana ny fandefasana sary amin'ny WhatsApp nefa tsy very kalitao | Avy amin'ny mac aho
WhatsApp dia mbola tsy voamarika ho sehatra iray izay mitandrema manokana ny kalitaon'ny sary. Somary nampijaly azy ireo mihitsy aza izy. Amin'ny lafiny iray dia azo takarina fa manao izany izy ka ny fandefasana sary dia dingana haingana ary tsy mandany angon-drakitra finday be dia be, na izany aza, dia tokony hanome ny mpampiasa safidy ihany koa ny fahafahana misafidy na hanery sary na tsia alohan'ny hizarana azy.
Ao amin'ny Telegram, tsy manana izany olana izany izahay, satria, avy amin'ny fampiharana mihitsy, dia afaka misafidy isika raha te hanery ny sary na handefa azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra tany am-boalohany, safidy izay, amin'izao fotoana izao, dia toa tsy ao amin'ny drafitra ho avy amin'ny Meta, toy ny orinasa mitantana. Ny tambajotra ankehitriny dia antsoina hoe Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus ...
Soa ihany fa ho an'ity olana ity dia manana vahaolana samihafa izahay, na dia tsy intuitive toy ny natolotry ny Telegram aza izy ireo. Raha tianao ho fantatra cAhoana ny fandefasana sary amin'ny WhatsApp nefa tsy very kalitao, Manasa anao aho hamaky hatrany.
1 Mizarà sary ho rakitra
2 Mizarà rohy miaraka amin'ireo sary
3 Avy amin'ny iCloud
4 Avy amin'ny iCloud miaraka amin'ny Mail Drop
5 Miaraka amin'ny WeTransfer
Mizarà sary ho rakitra
Raha tsy te hampiasa rindranasa hafa izahay hizarana sary amin'ny famahana azy tany am-boalohany, dia ny vahaolana atolotry ny WhatsApp antsika Zarao toy ny rakitra ireo sary sy horonan-tsary.
Eny, ny WhatsApp dia tsy mamela antsika hizara sary sy horonan-tsary fotsiny, fa koa mamela antsika hizara karazana rakitra rehetra, na dia tena untuitive aza ny dingana.
Para mizara sary avy amin'ny WhatsApp avy amin'ny iPhone nefa tsy very kalitao, tsy maintsy manao ireto dingana manaraka ireto isika:
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny mifidy ny sary rehetra tiantsika hozaraina amin'ny fampiharana Photos ary tehirizo ao amin'ny app Files izy ireo.
Manaraka, mandeha any amin'ny WhatsApp izahay, tsindrio ny clip ary, raha tokony hifidy Photo, dia misafidy tahirin-kevitra.
Manaraka izany, mankany amin'ny lahatahiry nitahiry ny sarinay, misafidy azy ireo izahay ary tsindrio ny Open.
Afaka manao izany koa isika mizara sary avy amin'ny WhatsApp avy amin'ny Macy tsy very kalitao, amin'ny alàlan'ny dingana asehoko anao eto ambany:
voalohany, andao hitsidika ny web.whatsapp.com ary mampifandray ny WhatsApp amin'ny iPhone amin'ny Internet izahay.
Manaraka, tsindrio ny bokotra Mampifandray ary tsindrio eo tahirin-kevitra.
Manaraka, mandeha any amin'ny lahatahiry misy ny sary ary fidio azy ireo.
Raha manana azy ireo voatahiry ao amin'ny Photos, eo amin'ny tsanganana havanana, ao amin'ny fizarana Multimedia, mifidy izahay Photos ka ny votoaty rehetra voatahiry ao amin'ny fampiharana dia aseho, araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony.
Mizarà rohy miaraka amin'ireo sary
Iray amin'ireo fomba mora indrindra raha mampiasa sehatra fitahirizana rahona samihafa ianao hitahiry ny dika mitovy amin'ny sarinao toy ny iCloud, Google Photos, Amazon Photos, OneDrive, Dropbox dia zarao amin'ny alalan'ny rohy ny sary.
Ny sehatra fitahirizana rahona rehetra dia mamela antsika safidio sary sy horonan-tsary hozaraina amin'ny rohy. Amin'ny fipihana amin'ity rohy ity dia afaka miditra amin'ny votoaty nozaraina ny mpandray nefa tsy voatery ho mpanjifa amin'ny sehatra ampiasaina.
Mba hizarana sary amin'ny alàlan'ny sehatra fitahirizana rahona dia tsy maintsy manokatra ny fampiharana isika, mifidy sary izay tiantsika zaraina tsy misy fahaverezan'ny kalitao dia tsindrio ny bokotra anjara ary farany Mamorona rohy.
Avy amin'ny iCloud
Raha nanakarama izahay toerana fitahirizana rahona miaraka amin'i Apple, afaka mizara mivantana rohy misy sary avy amin'ny rindranasa Photos izahay, rohy azonay mamorona mivantana avy amin'ny rindranasa misy amin'ny iOS na ao amin'ny rindranasa misy amin'ny macOS.
Rehefa vita ny rohy dia ity dia hotehirizina ao amin'ny tabilao misy ny fitaovantsika. Farany, tsy maintsy mizara an'io rohy io isika amin'ny fametahana azy amin'ny hafatra WhatsApp.
Amin'ny fipihana an'io rohy io, Afaka miditra amin'ireo sary sy/na horonan-tsary ireo na iza na iza izay nofidiantsika teo aloha. Mba hisintona azy ireo dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ny bokotra Download. Ireo sary sy horonan-tsary tafiditra dia ho hita mandritra ny 30 andro manaraka.
Avy amin'ny iCloud miaraka amin'ny Mail Drop
Apple dia nampiditra endri-javatra vaovao ahafahan'ny mpampiasa mizara rakitra lehibe, amin'ny alàlan'ny sehatra mailaka, izany hoe, amin'ny alàlan'ny kaonty iCloud.
Ny dingana dia tsotra toy ny famoronana mailaka ary manampy ny sary rehetra ho toy ny attachments. Amin'ny fipihana ny bokotra fandefasana, fa tsy handefa azy ireo any amin'ny mpandray azy, Apple dia hampiditra azy ireo amin'ny rahona ary dia hamorona rohy mankany iCloud izay ahafahan'ny mpampiasa misintona ny rakitra rehetra tiantsika hozaraina.
Rakitra rehetra azo alaina mandritra ny 30 andro. Amin'ny fipihana amin'ity rohy ity, dia afaka mahita sy misintona ny sary rehetra amin'ny famahana azy tany am-boalohany.
Ity asa ity azo alaina amin'ny Mac ihany koa mampiasa ny kaonty @ iCloud.com. Ity fiasa ity dia tsy misy amin'ny sehatra mailaka hafa, noho izany dia tokony hitandrina ianao amin'ny fampiasana ity fiasa ity amin'ny fampiasana ny kaonty iCloud ho mpandefa.
Ny dingana fizarana sary amin'ny alalan'ity fomba ity, miadana, satria tsy maintsy miandry ny fampidinana ireo sary ao amin'ny lohamilina isika, dingana iray izay mety haka fotoana bebe kokoa na latsaka arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana vaovao.
Miaraka amin'ny WeTransfer
Iza no milaza fa WeTransfer dia milaza izay sehatra hafa misy sy Internet ho an'ny mizara rakitra lehibe, rakitra tsy azonay mailaka.
Na dia tsy mitodika amin'ny fandefasana sary aza ity karazana sehatra ity, fa ny fizarana antontan-taratasy sy horonan-tsary lehibeazonay ampiasaina mora foana izany handefasana sary marobe amin'ny famahana azy tany am-boalohany.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana ireo sary ao amin'ny WeTransfer ary tsindrio ny bokotra fandefasana, ny sehatra dia hamorona url, URL izay tsy maintsy zarainay amin'ireo olona tiantsika halefa ireo sary amin'ny fanapahan-kevitra voalohany.
Miankina amin'ny fampiasantsika ny dikan-teny maimaim-poana na karama, ny fotoana farany indrindra ahafahan'ny rohy dia mety miovaova. Ny dikan-teny maimaim-poana dia mamela antsika mandefa rakitra miaraka amin'ny 2 GB ambony indrindra, rakitra azo alaina mandritra ny 7 andro.
WeTransfer dia misy amin'ny iOS, dia mitaky dika 14 farafaharatsiny ary mamela antsika hizara izay karazana rakitra rehetra voatahiry ao amin'ny fitaovantsika, ao anatin'izany ny atiny rehetra noforoninay tamin'ny fakantsarin'ny iPhone na iPad-nay.
Is koa azo alaina amin'ny macOS amin'ny maha-fampiharana azy ao amin'ny bara menu ambony, fampiharana izay ahafahantsika mampakatra rakitra amin'ny sehatra fifampizaràna tsy mila miditra amin'ny tranokalany. Ity fampiharana ity dia mila macOS 10.12. Raha tsy tohanana ny fitaovanao dia azonao atao ny mizara ireo sary amin'ny alàlan'ny anao pejy web
WeTransfer: famindran'ny bar menumaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fandefasana sary amin'ny WhatsApp nefa tsy very kalitao
Ahoana ny fomba fanaovana Memoji amin'ny iPhone
Ianaro ny zava-drehetra mifandraika amin'ny tahan'ny famelomana ny fitaovana Apple anao